Claritin-D vs Zyrtec-D: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा भारी खेल प्रेस कम्पनी, औषधि जानकारी समुदाय समुदाय, कल्याण कम्पनी खेलहरु समाचार, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण घरपालुवा जनावर चेकआउट
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Claritin-D बनाम Zyrtec-D
Claritin-D बनाम Zyrtec-D
भरिपूर्ण नाक वा छींक लाग्दा हामी धेरैलाई फार्मेसीमा जान र केही एलर्जी औषधि लिन सक्छ। भाग्यवस, त्यहाँ छनौट गर्न धेरै ओभर-दि-काउन्टर विकल्पहरू छन्। क्लेरटिन र जीरटेक केहि अधिक लोकप्रिय ब्रान्ड नामहरू हुन्, तर के तपाईंलाई थाहा छ त्यहाँ यी मेडहरूका धेरै संस्करणहरू छन्?
क्लेरटिन-डी र Zyrtec-D दुबै एक सियोडोफेड्रिन भनिने एक डिकन्जेस्टन्ट हुन्छ। D भनेको हो। स्यूडोफेड्रिनले नाकको परिच्छेदहरूमा रक्त वाहिका संकुचन गरेर सूजन र भीड कम गर्न काम गर्दछ। स्यूडोएफेड्रिन कहिलेकाँही एन्टीहिस्टामाइन्ससँग मिल्दछ र यसले नाकको भीडको लागि उत्तम एलर्जीको औषधि सिर्जना गर्दछ।
अधिकतम ibuprofen के तपाइँ लिन सक्नुहुन्छ
Claritin-D र Zyrtec-D समानताहरु साझा, तर तिनीहरूको पनि फरक छ जुन हामी यहाँ जान्छौं।
Claritin-D र Zyrtec-D बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
Claratin-D लराटाडाइन र स्यूडोफेड्रिनको संयोजनको ब्रान्ड नाम हो। लोराटाडाइन दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन हो जुन सामान्य एलर्जी लक्षणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। लोराटाडाइनले पहिलो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्स, जस्तै बेनाड्रिल (डिफेनहाइड्रामिन) भन्दा कम तन्द्रा उत्पन्न गर्दछ।
Claritin-D १२-घण्टा र २--घण्टा सूत्रहरुमा उपलब्ध छ। १२ घण्टाको क्लेरटिन-डी संस्करण दुई पटक लिन सकिन्छ र mg मिग्रि लोराटाडाइन र १२० मिलीग्राम स्यूडोएफेड्रिन समावेश गर्दछ। क्लेरीटिन-डी को २-घण्टाको संस्करण दैनिक एक पटक लिन सकिन्छ र १० मिग्रि लोराटाडाइन र २ 24० मिलीग्राम स्यूडोएफेड्रिन समावेश गर्दछ।
Zyrtec-D cetirizine र pseudoephedrine को संयोजनको ब्रान्ड नाम हो। लोराटाडाइन जस्तै, सेट्रिजाइन दोस्रो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन हो जसमा पहिलो पिढीको एन्टिहिस्टामाइन्सको तुलनामा कम सेडेटि effects प्रभाव हुन्छ।
Zyrtec-D मात्र १२-घण्टा सूत्रमा उपलब्ध छ। Zyrtec-D ले mg मिलीग्राम सेर्टिजाइन र १२० मिलीग्राम pseudoephedrine समावेश गर्दछ, र यो सामान्यतया दिनको दुई पटक लिन्छ।
Claritin-D र Zyrtec-D भ्रमित गर्नु हुँदैन नियमित Claritin र Zyrtec ।
Claritin-D र Zyrtec-D बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एन्टीहिस्टामाइन र डिकन्जेस्टन्ट एन्टीहिस्टामाइन र डिकन्जेस्टन्ट
जेनेरिक नाम के हो? लोराटाडाइन-स्यूडोफेड्रिन Cetirizine-pseudoephedrine
मानक खुराक के हो? एक mg मिलीग्राम - १२० मिलीग्राम ट्याब्लेट दैनिक दुई पटक
एक १० मिलीग्राम - २0० मिलीग्राम ट्याब्लेट एक पटक दैनिक एक mg मिलीग्राम - १२० मिलीग्राम ट्याब्लेट दैनिक दुई पटक
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो अवधिमा उपचार १० दिन भन्दा बढि छ छोटो अवधिमा उपचार १० दिन भन्दा बढि छ
सर्तहरू Claritin-D र Zyrtec-D द्वारा उपचार गरिएको
Claritin-D र Zyrtec-D दुबैले एलर्जीको राइनाइटिस, वा घाँस ज्वरोको लक्षणको उपचार गर्दछ। मौखिक एन्टीहिस्टामाइन्सलाई बग्ने नाक, छींकने, र खुजली, पानी आँखा जस्ता लक्षणहरू उपचार गर्न अनुमोदन गरिएको छ। क्लोरेटिन-डी र Zyrtec-D मा थपिएको डिकोनजेन्ट, स्यूडोफेड्रिन, भद्दापन वा नाकको भीखको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ।
दुबै Claritin-D र Zyrtec-D ले मौसमी एलर्जी राइनाइटिस र बारहमासी एलर्जी राइनाइटिसको उपचार गर्न सक्छन्। मौसमी एलर्जी वर्षको केहि महिनाहरूमा भड्न सक्छ जब बारहमासी एलर्जीले मानिसहरूलाई वर्षभर असर गर्छ। एलर्जीको राइनाइटिस एल्टर्जेनको जोखिमले गर्दा हुन्छ, जस्तै घरपालुवा रून्ड वा धुलोको कण।
सर्त Claritin-D Zyrtec-D
के Claritin-D वा Zyrtec-D अधिक प्रभावी छ?
Claritin-D र Zyrtec-D एलर्जीक राइनाइटिसको उपचारमा पनि त्यस्तै प्रभावकारी छन्। किनभने तिनीहरूमा स्यूडोफेड्रिन छ, क्लेरेटिन-डी र Zyrtec-D नासिका भीडको उपचारको लागि उनीहरूको नियमित रूपहरू भन्दा बढि प्रभावकारी छ जुन pseudoephedrine समावेश गर्दैन।
Zyrtec-D ले Claritin-D भन्दा छिटो लक्षण राहत प्रदान गर्न सक्छ। Cetirizine एक घण्टा भित्र काम सुरु गर्दछ र loratadine तीन घण्टा भित्र राहत प्रदान शुरू गर्दछ। एक मा डबल-अन्धा, अनियमित अध्ययन , cetirizine २ score..4% ले ११.२% को बिरुद्द लक्षण स्कोर सुधार गर्न फेला पर्‍यो मौसमी एलर्जिक राइनाइटिस भएका बिरामीहरूमा लोराटाडाइन। Cetirizine, तसर्थ, लोराटाडाइन भन्दा एक अधिक प्रभावी antihistamine हुन सक्छ। जे होस्, cetirizine अधिक सम्भावना हुन सक्छ loratadine भन्दा उनी निन्द्रा वा बेहोश हुन। सुरक्षा महत्वपूर्ण छ जहाँ काम मा काम गर्नेहरूका लागि Loratadine एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ।
तपाईंको डाक्टर वा फार्मासिष्टसँग परामर्श गर्नुहोस् तपाईंको लागि उत्तम एलर्जी औषधिमा। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले फरक एन्टिहिस्टामाइन सिफारिस गर्न सक्छ, जस्तै एल्लेग्रा (फेक्सोफेनाडाइन), तपाइँको एलर्जी लक्षण र समग्र स्थितिमा निर्भर गर्दछ।
कभरेज र क्लरेटिन-डी बनाम Zyrtec-D को लागत तुलना
Claritin-D सामान्यतया चिकित्सा र बीमा योजनाहरु द्वारा कभर हुँदैन। ओटीसी औषधिको रूपमा, क्लारिटिन-डी फार्मेसीहरूमा व्यापक रूपमा उपलब्ध छ। Claritin-D को औसत खुद्रा मूल्य and 50 भन्दा बढी हुन सक्छ मात्रा र शक्तिमा निर्भरता। एक एकलकेयर छुट कार्डको साथ, तपाईं पन्ध्र २ 24 घण्टा ट्याब्लेटको बक्सको लागि around १ to को लागी कम गर्न सक्नुहुनेछ। डिस्काउंट कार्डहरू पनि क्लेरटिन-डी १२-घण्टा ट्याब्लेटहरूको लागि उपलब्ध छन्।
Zyrtec-D प्राय स्थानीय फार्मेसीमा पनि लिन सकिन्छ। यो सामान्यतया चिकित्सा र बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छैन। Zyrtec-D ट्याब्लेटको बक्सको लागि, औसत खुद्रा लागत $ 30 देखि $ 50 को आसपास छ। यो लागत सहभागी फार्मेसीहरूमा एकलकेयर कार्डको साथ लगभग $ १० मा कम गर्न सकिन्छ।
मानक खुराक एक mg मिलीग्राम - १२० मिलीग्राम ट्याब्लेट दैनिक दुई पटक (१ of को मात्रा)
एक १० मिलीग्राम - २0० मिलीग्राम ट्याब्लेट एक पटक दैनिक (of० को मात्रा) एक mg मिलीग्राम - १२० मिलीग्राम ट्याब्लेट दैनिक दुई पटक (२ of को मात्रा)
एकलकेयर लागत $ १ $ १०
Claritin-D बनाम Zyrtec-D का सामान्य साइड इफेक्टहरू
Claritin-D र Zyrtec-D का सबै भन्दा सामान्य पक्षहरू उनी निन्द्रा वा निन्द्रा, चक्कर, थकान, छाला दाग, र सुख्खा मुख हुन्। यी औषधिहरूमा स्यूडोफेड्रिनले साइड इफेक्ट पनि निम्त्याउँदछ जस्तै अनिद्रा, घबराहट, र मुटुको धड्कन।
अधिक गम्भीर साइड इफेक्ट ड्रग को लागी एक एलर्जी प्रतिक्रिया समावेश हुन सक्छ। एलर्जी प्रतिक्रिया गम्भीर दाग वा सास फेर्न कठिनाईको रूपमा देखा पर्न सक्छ। अन्य गम्भीर साइड इफेक्टहरू सामान्यतया एक औषधी अन्तरक्रियाको कारण विस्तार गरिएको हुन्छ। अधिक जानकारीको लागि Claritin-D बनाम Zyrtec-D का ड्रग अन्तर्क्रिया हेर्नुहोस्।
तल Claritin-D र Zyrtec-D का सामान्य साइड इफेक्टहरूको एक सिंहावलोकन हो।
टाउको दुखाई हो * हैन -
मुटुको धडकन हो * हो *
यो देखा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावहरूको पूर्ण सूची नहुन सक्छ। अधिक जान्नको लागि कृपया तपाइँको डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सन्दर्भ गर्नुहोस्। * रिपोर्ट गरिएको छैन
भीड र घाँटी दुखाइ को लागी सबै भन्दा राम्रो औषधि
स्रोत: डेलीमेड ( Claritin-D ), डेलीमेड ( Zyrtec-D )
Claritin-D बनाम Zyrtec-D को ड्रग अन्तरक्रिया
Claritin-D र Zyrtec-D समान ड्रग अन्तरक्रिया साझा गर्दछ। दुबै औषधिहरूले अन्य औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन् जसले CNS डिप्रेशनन्ट प्रभावहरू जस्तै सुन्द र सेडेशन गर्दछ। Claritin-D र Zyrtec-D को प्रयोग बाट टाढिन वा निगरानी गरिनु पर्छ यदि यदि तपाईले प्रथम पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्स, ओपियोइड्स, मांसपेशी विश्रामकर्ताहरू, वा केहि antidepressants लिदै हुनुहुन्छ। जब यी कुनै पनि औषधिहरूसँग मिलाईन्छ, तब आवाश्यक असरहरूको जोखिम बढ्दछ।
Claritin-D र Zyrtec-D मा स्यूडोफेड्रिनले अन्य औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न पनि सक्छ। क्लोरिटिन-डी र जाइरटेक-डी लिनु हुँदैन मोनोमाइन अक्सिडेज (एमएओ) इनहिबिटरमा वा एमएओ अवरोधकर्तालाई रोक्ने १ 14 दिन भित्र। अन्यथा, खतरनाक उच्च रक्तचापको खतरा बढेको छ। स्यूडोएफेड्रिनको केन्द्रीय स्नायु प्रणालीमा उत्तेजक प्रभावहरू हुन्छन् जसले रक्तचाप औषधि (एन्टिहाइपरटेन्सिव) को प्रभाव कम गर्न सक्छ।
औषधि औषधि वर्ग Claritin-D Zyrtec-D
मेक्लिजाइन पहिलो पुस्ताको एन्टिहिस्टामाइन्स हो हो
ऑक्सीकोडोन ओपियोइड्स हो हो
साइक्लोबेन्जाप्रिन मांसपेशी आराम हो हो
Clomipramine Tricyclic antidepressants हो हो
Phenelzine MAO अवरोधकर्ताहरू हो हो
Chlorthalidone Antihypertensives हो हो
Claritin-D र Zyrtec-D को चेतावनी
Claritin-D र Zyrtec-D ले तन्द्रा र परिवर्तन गरिएको मानसिक सतर्कता निम्त्याउन सक्छ। एन्टीहिस्टामाइनको प्रयोग सामान्यतया ड्राइभि or वा अपरेटि machinery मेशिनरीमा वेवास्ता गर्नुपर्छ।
Claritin-D वा Zyrtec-D मा अवयवहरूको लागि एलर्जी सम्भव छ। यदि तपाईंलाई गम्भीर दाग लागेको छ वा सास फेर्न समस्या भएको छ भने तत्काल मेडिकल उपचार खोज्नुहोस्।
Claritin-D र Zyrtec-D सावधानीका साथ प्रयोग गर्नुपर्दछ यदि तपाईंसँग हृदय रोग वा मुटुको जटिलताको इतिहास छ। स्यूडोफेड्रिन एक सीएनएस उत्तेजक हो जसले रक्तचाप बढाउन र मुटुको धड्कनहरू निम्त्याउन सक्छ। यसले हृदय घटनाहरूलाई जोखिम बढाउन सक्दछ उनमा असामान्य हृदय ताल, हृदयघात वा स्ट्रोकको इतिहासको साथ।
क्लेरटिन-डी वा Zyrtec-D को प्रयोग कलेजो वा मिर्गौला समस्या भएकाहरूमा अनुगमन गर्न आवश्यक पर्दछ। कलेजो वा मिर्गौलाका समस्याहरूले कसरी यी औषधिहरू शरीरमा मेटाबोलिज्ड, वा प्रशोधन गरिएकोमा प्रभाव पार्न सक्छ र प्रतिकूल प्रभावहरू निम्त्याउँदछ।
Claritin-D बनाम Zyrtec-D को बारे मा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
Claritin-D एक over-the-काउन्टर (OTC) antihistamine र decongestant हो। Claritin-D ले लोराटाडाइन र स्यूडोफेड्रिन समावेश गर्दछ। यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ मौसमी एलर्जीको उपचार गर्नुहोस् र, विशेष रूपमा, एलर्जी नासिका सम्बन्धी लक्षणहरू।
Zyrtec-D के हो?
Zyrtec-D एक OTC एंटीहिस्टामाइन र डिकन्जेस्टन्ट एफडीए एलर्जी राहत को लागी अनुमोदित छ। Zyrtec-D ले cetirizine र pseudoephedrine समावेश गर्दछ। यो एलर्जीको राइनाइटिसका लक्षणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गर्दछ, जस्तै छींक र नाकको भीड।
के Claritin-D र Zyrtec-D समान छ?
Claritin-D र Zyrtec-D सँग समान सक्रिय तत्वहरू र प्रयोगहरू छन्। तिनीहरूमा pseudoephedrine समावेश छ, साथै पनि चिनिन्छ Sudafed । यद्यपि, क्लेरटिन-डी र Zyrtec-D समान छैन। तिनीहरूमा विभिन्न एन्टीहिस्टामाइन्स हुन्छन्; Claritin-D ले लोराटाडाइन र Zyrtec-D ले cetirizine समावेश गर्दछ। क्लेरटिन-डी १२-घण्टा र २--घण्टा सूत्रमा आउँदछ जबकि Zyrtec-D मात्र १२-घण्टाको फर्म्युलेसनमा उपलब्ध हुन्छ।
के यो अचानक ल्याक्टोज असहिष्णु बन्न सम्भव छ?
के Claritin-D वा Zyrtec-D राम्रो छ?
Claritin-D र Zyrtec-D एलर्जी लक्षणहरूको लागि प्रभावकारी छ। एक थप डिकन्जेस्टन्टको साथ, दुबै औषधीहरू साइनस प्रेशर र नाकको भीडको उपचारको लागि प्रभावकारी हुन्छन्। केही अध्ययनहरूले यो सुझाव दिन्छ Zyrtec अधिक शक्तिशाली छ Claritin भन्दा। यद्यपि Zyrtec ले क्लेरटिन भन्दा बढि शामक प्रभाव पार्न सक्छ। तपाईंको लागि उत्तम एलर्जी औषधिको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
के म गर्भवती हुँदा क्लेरटिन-डी वा Zyrtec-D प्रयोग गर्न सक्छु?
Claritin-D र Zyrtec-D सामान्यतया गर्भावस्थामा सिफारिस गरिदैन। ती दुबैमा स्यूडोफेड्रिन नामक डिकन्जेस्टन्ट हुन्छ जुन पहिलो त्रैमासिकको अवधिमा अवहेलना गर्नुपर्दछ। का लागि तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संग परामर्श गर्नुहोस् गर्भावस्थामा एलर्जी उपचार विकल्प ।
के म Claritin-D वा Zyrtec-D रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
जब रक्सीसँग मिसाइन्छ, क्लेरटिन-डी र Zyrtec-D ले बढि निन्द्रा वा निन्द्राको कारण बनाउन सक्छ। यो सिफारिस गरिएको छैन एन्टीहिस्टामाइन्स लिँदा रक्सी पिउनुहोस् ।
Claritin-D को बराबर के हो?
क्लेरटिन-डी अन्य एन्टीहिस्टामाइन्स र डिकन्जेस्टन्ट ड्रग्ससँग समान काम गर्दछ। एन्टीहिस्टामाइन र डेकन्जेस्टन्ट समावेश गर्ने अन्य एलर्जी औषधिहरूका केही उदाहरणहरू Zyrtec-D (cetirizine / pseudoephedrine) र Allegra-D (फेक्सोफेनाडाइन / स्यूडोफेड्रिन) समावेश गर्दछ।
के यो प्रतिदिन Claritin-D लिन खराब छ?
जबकि नियमित क्लेरटिन कहिलेकाँही दीर्घकालीन आधारमा लिन्छन्, क्लेरटिन-डी केवल छोटो अवधिको उपयोगको लागि सिफारिश गरिन्छ। स्यूडोएफेड्रिन एक पटकमा १० दिन भन्दा बढि लिन सिफारिस गरिदैन।
के Claritin-D का कुनै साइड इफेक्ट छ?
क्लेरटिन-डीले केही साइड इफेक्टहरू निम्त्याउन सक्छ जुन सामान्यतया हल्का हुन्छन् र आफ्नै रूपमा चल्दछन्। Claritin-D का सामान्य साइड इफेक्टहरू तन्द्रा, चक्कर, थकान, र सुख्खा मुख हुन्। क्लेरटिन-डीले घबराहट, वा चिन्ता, र मुटुको धड्कनहरू पनि निम्त्याउन सक्छ।
के हात सेनिटाइजरको समयावधि समाप्त हुन्छ?
एफडीएले पहिलो एलिकिस जेनेरिक: apixaban लाई अनुमोदन गर्‍यो
तपाइँ एकै समयमा cialis र वियाग्रा लिन सक्नुहुन्छ
त्यहाँ lyrica को लागी एक सामान्य औषधि छ
मँ प्रति गोली को लागी adderall बेच्नु पर्छ
कहिले सम्म allegra तपाइँको प्रणाली मा रहन्छ
Symbicort को लागी सामान्य नाम के हो